Arsenaalii fi Cheelsiin Injifataman; Manchastar Siitiin Cheelsitti dhiphise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Arsenaalii fi Cheelsiin Injifataman; Manchastar Siitiin Cheelsitti dhiphise
Daqiiqaan afurtanii-shanan jalqabaa Arsenaaliifis ta’ee deeggartoota isaa hundaaf kan rifannootaa, wonti hineegne keessatti raawwate ture. Taphni jalqabeen osoo qajeelatti hinbeekamne kan Piiter Krawuch goolii takka Stook Siitiif kiyyoo keessa kan marmarse. Arsenaal dursa fudhachuu mitii osoo Stook Siitiin wolhinqixxoofne, Booyaan goolii 2ffaa kan Arsenaalitti dabale- daqiiqaa 35ffa irratti. Akka waan kuni hingeennee, gooliin 3ffaas dhuma marsaa kanaa irratti Arsenaalitti dabalamte. Kuni hundi kan ta’utti jiru marsaa taphaa isa jalqabaa irratti. Daqiiqaan 45 jalqabaa- Arsenaal 0, Stook Siitiin 3 goolabame. Hundi, Arsenaal maal fooyyessee, mala maal baasee gadi baha jechuun ija gara kutaa uffannaatti deebise.
Arsenal marsaa 2ffaa kan eegale murannoo danbalii isaan liqimsuti jiru gara Stook Siitiitti deebisuu qabna waan jedhuun fakkaata. Kanaaf ragaan tapha marsaa 1ffaa irra fooyya’aa ta’e agarsiisan, goolii lamas laakkofsiisan. Arsenaaliif daqiiqaa 68ffaa fi 70ffaa irratti Kaazorlaa fi Raamsiin goolii wolduraa duubaan laakkofsiisan. Stook Siitii rifachiisuuf gahaa turan, gooliin kunniin. Bifa kamiinuu, garuu, Arsenaaliin injifannoo hedduu barbaadamu gonfachiisuu hindandeenne. Yaaliin Arsenaal gara dhumaatti taasise, gufgufii gabaa galgalaan alatti wan biroo jedhamee waamamuu hindanda’u. Marsaa 1ffaa irratti kan hireen harka ‘the gunners’ harcaate.
Imalli Cheelsiin gara kaaba-baha biyyattii godhe akkum isa bara dabree baranas gabaabbachuu umrii injifannoo Cheelsiif sababa ta’e. Tibbana Niwuukaasil kan Cheelsii 2 – 1 injifachuun akka mataan ‘the Blues’ lafailaalu kan taasisan. Cheelsiin tapha boqonnaa duraan hedduu garee fooyya’aa ture. Boqonnaa boodas hanga daqiiqaa dhumaatti injifachuuf ykn qabxii qooddachuuf yaaliin godhe hundi bu’aa malee hafe. Hiree argamte hundatti osoo fayyadame ta’ee dubbiin silaa bifa biraa qabata ture. Hunduu osoo hintaane hafe. Niwuukaasil nama 10 taphatus qabxii 3 kabajsiifatee bahuu danda’eera. Ciiseen goolii lama (daq. 57 fi 78) laakkofsiisuudhaan kan Cheelsiin akka liqimfamu taasise. Goolii daqiiqaa 83ffa irratti Drogbaan galche kan Cheelsii duwwaan bahuu irraa baraartee.
Cheelsiin qabxii gatuun morkataa isaaf, Manchaster Siitii, kennaa ‘Chritsmas’ ture jechuun nidanda’ama. Tapha garee lamaan jiddutti geggeffameen 1- 0 Manchastar Siitiin garee Evartan kan moo’ate. Tapha Siitii fi Evarton jiddutti geggeeffameen Sarjiyoo Agu’eroon tapha jiddutti kutee, daqiiqaa 7ffaa irratti, dirree gadi lakkisuuf dirqame. Agu’eeroon taphaan ala ta’us garuu Siitiin Yayaan Turee daqiiqaa 24 irratti galchuun injifannoo Siitiif sababa kan ta’e. Injifannoon Siitii muummee gabatee Ligii Ingiliizii irratti jijjiiramni fide hinjiru. Garuu, garaagarumaan Cheelsii fi Siitii jidduu jiru gara qabxii 3 itti akka gadi bu’u taasiseera.
Gama biroon, taphni gama Liivarpoolii fi Sandarlaand jiddutti geggeeffame O – 0 goolabame.
Guutuu gabatee Liigota Awrooppaaf as tuquun ilaalaa.
Previous articleNASAn Oraayen gara samiitti erguun gadaa Maarsii eegale
Next articleQabeenyi Liibiyaa Raandii triliyoona heddutti shallagamu Aafrikaa Kibbaa keessatti dhoksameera jedhame